Windows Vista : Waa Barnaamij ay soo saartay Shirkada Sameysa Barnaamijyada Kumbuyuutarada ee Microsoft, barnaamijkaan oo loo isticmaalo Kombuyuutarada waxaa sameyskiisa la bilaabay 22 Luulyo 2005 waxaase la dhameystiray 8 November 2006. iyadoo Suuqyada Caalamka Lagu siidaayay 30 Janaayo 2007. Iyadoo haatan shirkada Microsoft ay soo saartay 22 Luulyo 2009, Barnaamij Cusub oo la yiraahdo Windows 7 kaas oo suuqyadana lagu sii daayay 22 Oktoobar 2009. Windows Vista waa nidaam farsameed oo ay samaysay Microsoft si loogu isticmaalo kombiyuutarada shakhsi ahaaneed, oo ay ka mid yihiin guriga iyo macaamilka ganacsiga, laptops, kombiyuutarka kiniiniga iyo kombiyuutarada xarunta warbaahinta. Horumarinta waxaa la dhameeyey 8-dii November 2006,  iyo saddexdii bilood ee soo socda, waxaa la sii daayay marxaladaha qalabka kombuyuutarka iyo kuwa software-yada, macaamiisha ganacsiga iyo kan dukaamada. 30kii Janaayo 2007, waxaa la sii daayey adduunka  waxaana loo diyaariyey iibsashada iyo ka soo iibsashada suuqa Windows Market  La sii daayay Windows Vista waxay soo gashay in ka badan shan sano ka dib markii la soo bandhigay horaantii, Windows XP, waqtiga ugu dheer ee u dhaxeeya sii deynta sii deynta ee nidaamyada Microsoft Windows desktop.
File:Microsoft Codename LongHorn v6.0 Build 4074.png
Desktop screenshot of Microsoft Windows Code Name Longhorn build 6.0.4074 Milestone 7.
Noocyada cusub ee Windows Vista waxaa ka mid ah casriyeyn casriga casriga ah iyo qaab muuqaal ah oo lagu magacaabo Aero, oo ah qayb ka mid ah raadinta raadinta ee loo yaqaan 'Search Search', dib u habeynta shabakada, maqalka, daabacaadda iyo bandhigyada hoose, iyo qalabka cusub ee multimedia sida Windows DVD Maker. Vista ayaa looga golleeyahay in uu kordhiyo heerka isgaadhsiinta ee u dhaxeeya makiinadaha ku jira shabakadda guryaha, iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada isbarbar-dhigga si loo fududeeyo faylasha iyo warbaahinta u dhexeeya kombiyuutarada iyo qalabka. Windows Vista waxaa ka mid ah version 3.0 ee NET Framework, taas oo u oggolaanaysa horumarinta software inay qoraan codsiyo aan lahayn Windows API.
Ujeedada aasaaska u ah ee Microsoft ee Windows Vista waa inuu wanaajiyo xaaladda ammaanka ee nidaamka Windows ee hawlgalka.  Mid ka mid ah dhaleeceynta guud ee Windows XP iyo horjoogayaasheeda waxay ahayd dayacmoodka caadiga ah ee la isticmaalo iyo guud ahaan macquulnimada cayayaanka, fayruusyada iyo qulqulatada qulqulka. Guddoomiyaha Microsoft Bill Gates ayaa ku dhawaaqay bilowgii sanadka 2002 shirkad "Trust for Computing Computing", kaas oo loogu talagalay in lagu daro amniga dhinacyo kasta oo ka mid ah horumarinta software ee shirkadda  Microsoft ayaa sheegay in ay mudnaanta siinayso kor u qaadista ammaanka Windows XP iyo Windows Server 2003 ee ka sareysa dhammeystirka Windows Vista, sidaas darteed dib u dhigista dhamaystirka.   mini|150px|Das Logo von Windows Vista
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Vista&oldid=179173"
Last edited on 30 Agoosto 2018, at 13:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Agoosto 2018, marka ee eheed 13:37.